Indawo yokuhlala yeTatra - indlu esemaphandleni iHawrań - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yeTatra - indlu esemaphandleni iHawrań
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKamil
Sikunika izindlu ezimbini ezisandul 'ukwakhiwa unyaka wonke, ezifudumeleyo, ezidla ngokuhlalisa abantu abayi-6 kwindawo enye . Ungakwazi nokuphinda ulungiselele indawo yokuhlala ukuya kutsho kubantu abayi-8 ngamalungiselelo angaphambili. Izindlu ezisemaphandleni ziphakathi kweelifti eziyi-4 ze-ski kunye neendawo ezintle ze-Tatras.
Kumgangatho osezantsi wendlu nganye esemaphandleni kukho ikhitshi, igumbi lokuhlambela negumbi lokuhlala elinesofa elala abantu ababini. Ngaphantsi kukho amagumbi ayi-2 kunye nendlu yangasese. Igumbi lokuqala linebhalkhoni enebhedi elala abantu ababini. Kwesibini kukho ibhedi enye ephakathi kunye nebhedi enye.
Kwinguqulelo yabantu abayi-8, kufakwa ibhedi enye kwigumbi lokuqala, kanti kwigumbi lesibini kukho abantu abayi-2 abahlala kwibhedi ephakathi.
IBiałka Tatrzańska yenye yezona ndawo zinomtsalane zabakhenkethi kulo mmandla – indawo efanelekileyo kwimidlalo yasebusika, kunye nabalandeli bokunyuka intaba ehlotyeni. Kukho inethiwekhi eyakhiwe kakuhle kakhulu yeelifti namathambeka e-ski kunye neendawo zokuqubha ezinamanzi ashushu zale mihla.
Kwindawo ekufutshane nendlu kukho i-t-bar lift (50m) elungele abaqalayo nabantwana abancinci, kwaye kumgama we-500m ukusuka kwizindlu ezisemaphandleni kukho isitulo seZawrat Ski. I-Kotelnica Białczańska Ski Resort ikwiikhilomitha eziyi-3.5 ukusuka kwindawo esihlala kuyo.
Kukho neepuli ezininzi ezinamanzi ashushu kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo:
I-Terma Bania, i-thermal Baths Bukovina, i-thermal Baths Hot Stream, kunye ne-Chochołowskie thermal Baths.
Ebusika, ukukhwela amahashe nako kulungiselelwe eBiałka.
IBiałka ineevenkile ezininzi zokutyela ezithengisa ukutya kwasePoland naseItaly. Sicebisa ngokukhethekileyo ivenkile yokutyela iBury Miś (1,3km) – indawo ekhethekileyo, kungekhona nje ngenxa yokutya kwayo okumnandi, kodwa nangenxa yangaphakathi yayo engaqhelekanga kunye nezixhobo - bona ngokwakho!